ငါးရှဥ့်အရိုးပြောက်ဆိုတာကို ချက်ကြဖို့ကို ခေတ်မီသူ အိမ်ရှင်မလှလှလေးတွေဟာ အရင်ကလို ခက်ခဲနေစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ ငါးရှဥ့်ကိုင်အုံး အရိုးထုတ်အုံး ဒါတွေဟာ အလွန်ကို စိတ်ရှုပ်စရာ ကောင်းလှမှာ အမှန်ပါပဲနော်။ ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် ကြောက်စရာ လန့်စရာ စိတ်ရှုပ်စရာ ကင်းတယ်လို့ မအိသက် က ပြောရပါသလဲနော်။ ဘာလို့ဆိုတော့လေ City Mart ရဲ့ Frozen Food တွေထားတဲ့ ကောင်တာနေရာမှာ သွားရှာလိုက်ရုံနဲ့ အရိုးထုတ်ပြီး သန့်စင်ပြီးသား ငါးရှဥ့်အသားလေးများကို သေချာစွာ ထုပ်ပိုးထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။
ကဲ ဒါဆိုရင် ငါးရှဥ့်ကိုင်ရမဲ့ အရိုးထုတ်ရမဲ့ ခက်ခဲတဲ့အဆင့်ကို အိမ်ရှင်မ လှလှလေးတွေ ကျော်လွှားပြီး ဖြစ်နေရပါပြီနော်။ အခုဆိုရင်တော့ ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ရောက်လာပါပြီ။ ဒါဆိုရင် အသဲစွဲစေမဲ့ ငါးရှဥ့်အရိုးပြောက် ချက်နည်းလေးကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင် …
၁။ ငါးရှဥ့်အသားလေးများကို အနေတော်အရွယ် ခပ်ရှည်ရှည် အချောင်းလေးများ လှီးဖြတ်ထားရပါ မယ်။ ဆနွင်းအနည်းငယ်နှင့် ဆား ၁ ဇွန်းထည့်ပြီး နယ်ထားပေးပါ။
၂။ ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီးထားပေးပါ။ကြက်သွန်ဖြူကိုတော့ ဓါးပြားရိုက်ထားပေးပါ။စပါလင်ကို ရိတ်ရိတ်ပါးပါး လှီးပေးပါ။ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးကို ဆနွင်း၊ အရောင်တင်ထည့်ပြီး ဂျင်းနဲ့စပါလင်များပါထည့်ကာ ဆီသတ်ပေးရပါမယ်။
၃။ ဆားနှင့် ငါးအသားမှုန့်ကိုပါ ရောထည့်ပေးပါ။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ကြော်ရင်းနဲ့ မွှေးလာပြီး ရွှေဝါရောင်သန်းကာ ကျွတ်လာပြီဆိုရင် ငါးရှဥ့်အသားများပါထည့်ပြီး ရောပေးပါ။ ငါးရှဥ့်ကို ထည့်တဲ့အ ခါမှာ ငါးက ထွက်တဲ့ အရည်ကြောင့် ကြက်သွန်အကျွတ်များက နူးအိသွားပါမယ်။ ငါးက ခဏလေးနဲ့ နူးလွယ်တာမို့ ခဏမျှလှိမ့်ပြီးရင် ဆီပြန်လာတာနဲ့ အရသာ အပေါ့အငန်မြည်းပြီး စိတ်ကြိုက်အနေ အထားမှာ မီးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီ။
ငါးရှဥ့်အရိုးပြောက်ဆီပြန် ဆိုတဲ့ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းလေးကို ချက်ဖို့ပါဝင်တဲ့ အမယ်အားလုံးကို City Mart တနေရာထဲမှာ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
I would like to show how it is not difficult for the pretty modern housewives to cook Boneless eel curry anymore. To handle the eel, to remove the bones. It is true that these steps are frustrating to go through. If that’s so, why am I even saying it is lack of terror and free from frustration? The reason is that the prepacked and purified eel flesh can be found at the frozen food counters at City Mart! So, the difficult stages of handling and removing eels will have been easily overcome.
And now, here comes the cooking. Let’s takealook at the recipe of boneless eel curry.
Firstly, onions, garlic and chillies together with turmeric, colouring powder, ginger and lemon grass are added to heated oil. Then, salt and fish seasoning powders are added. When the onions and garlic start to smell good and turn golden yellow crispy, the bone-removed eel flesh is put into the mixture. The fluid coming out from the flesh can soften the crispy onions and garlic. The eel turns tender only inawhile. When it becomes oil gravy with the water boiled off, the flavor can be adapted to your taste with more or less salt. Then, the stove can be turned off.
All the ingredients used in this boneless eel curry can be bought by one-stop shopping at City Mart!